Shiinaha M1013 pvc gacmo gashi gacmo gashi pvc ah oo tayo sare leh oo la adeegsan karo 10 sanduuq pvc galoofyada badbaadada Warshadaha iyo Alaab-qeybiyeyaasha | Xinyuanjiaye
Galoofyada gacanta ee M1013 pvc gacmo gashi tayo sare leh oo pvc ah oo la adeegsan karo 10 sanduuq oo pvc galoofiska badbaadada ah
Ilaalinta darajada caafimaad ee sare oo aan lahayn budo iyo borotiin cinjir ah. Glo galoofyada saxda ah ee vinyl ee loogu talo galay dadka quseeya xasaasiyadda cinjirka. Si fiican, jilicsan gadhka. Awoodda gantaallada culus Pow bilaash ah si aysan u faragalin uxirmayaasha ama dharka.
Foornada bilaashka ah ee Vinyl Gloves waxay bixisaa 100% isku-darka, waa xoogaa fudud oo jilicsan marka loo eego qiyaasta vinyl-ka caadiga ah waxayna leedahay badbaado daaqsimeed oo loogu talagalay codsiyada badan. Dareen wanaagsan iyo wax qabad. Waxay u tahay daaweyn wanaagsan dadka qaba xasaasiyada Nooca I.
1.Waxku waa pvc, oo aan nafaqo lahayn, ur lahayn iyo eco-saaxiibtinimo, galoofyadu guud ahaan waa u amaan dhammaan isticmaaleyaasha.
2. Nadiifin fudud, galoofyada waa la tuuri karaa, iska tuur kadib markaad isticmaasho.
3.Compact design and Lightweight, way fududahay in la qaado.
4. Gacmahaaga nadiifi
Tabaha loo xirto galoofyadayada guluubka ee PVC:
1. Fadlan googo ciddiyaha markaad xidhan tahay. Ciddiyaha gacmaha oo aad u dheer ama aad u af badan ayaa si fudud dhaawici kara galoofyada.
2. Fadlan isticmaal koollada farahaaga inaad gashato, si aad uga fogaato in galoofku galo.
3. Fadlan galoofisyada gacmahaaga gacanta ka wareeji faraha markii aad ka qaadaysid galoofyada.
Habka wax soo saarka ee galoofyada cinjirka jilicsan: galoofisyada xiro ee ka sameysan isku dhafka tayada sare leh / agabyada dabiiciga ah iyo aaladaha kale ee ganaaxa ah waxay leeyihiin xoog gantaal iyo dabacsanaan; habsocod daaweynta ka dib, oo aan lahayn cuncun maqaarka iyo xasaasiyad; badeecaduhu waxay leeyihiin daweyn gaar ah oo dusha sare ah, dusha gudaha oo siman iyo curling waa fududahay in la xidho oo raaxo leh.
Faa'iidooyinka galoofyada cinjirka la gashado: galoofyada xiidmaha waa kuwa labada gacmood ku wada siman yihiin, oo ay ku jiraan curcado gacan-gashan iyo nashqadeynta maqaarka dushiisa; iyagu waa kuwo u adkaysan jilicsanaanta iyo jebinta; waxay u adkaystaan ​​aashitada, alkali, dufan, saliida shidaalka iyo dareeraha kala duwan, iwm.; waxay leeyihiin iska caabin badan oo kiimiko ah, iska caabin fiican oo saliid ah / waa raaxo / gacan badbaadin
Isticmaalka galoofisyada cinjirka ah: galoofisyada xiisaha leh ayaa ku habboon guriga, warshadaha, quruxda, cilmi baarista sayniska, qalabka saxda ah, soo saarista gawaarida, soosaarida batteriga, warshadaha FRP, isu imaatinka diyaaradaha, warshadaha hawada, nadiifinta deegaanka iyo nadiifinta.
Maaskaro ilaalin kara: Maaskaro dhawr ah oo la tuuri karo ayaa inta badan ka kooban 2 ~ 3 lakab oo ka mid ah dharka aan guntin. Maaskaro la adeegsan karo oo la tuuri karo ayaa inta badan loo isticmaalaa boodh-boodhka iyo shaandhaynta ashyaa'da waaweyn.
Maaskaro caafimaad oo la tuuri karo: Maaskaro caafimaad oo la tuuri karo waxay ka kooban yihiin 3 lakab, oo ay ku jiraan laba lakab oo ka mid ah dharka aan la toxin iyo hal lakab oo ah dharka dhalaalaya, kuwaas oo si wax ku ool ah u shaandheyn kara dhibcaha, bakteeriyada, waxyaabaha ka kooban, iwm. Waxaa lagu talinayaa in la xusho muddadan qaaska ah, kuwaas oo ku gaari kara ilaalin wanaagsan.
Maaskarooyinka difaaca ee KN95: Maska loo yaqaan "KN95 mask" guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 4 ~ 5 lakab, oo ay ku jiraan dhar aan la tolo iyo 1 ~ 2 dharka meltblown. Maaddada maaskarada ciiddu waa inay ahaataa mid aan xanaaq lahayn oo aan xasaasiyad u lahayn haragga, oo sheyga filterku aanu waxyeello u lahayn jidhka aadanaha; dhexroor walxaha ka soo baxa waa inay ka yaraadaan 5 micron oo cabirka xaddiga boodhka waa inuu ka weynaadaa 95%. Dhexdooda, qiimaha 95% ma aha celceliska qiimaha, laakiin waa qiimaha ugu yar, marka qiimaha dhexdhexaadka ah ee alaabada dhabta ah badiyaa waxaa lagu dejiyay 99%.
FFP3 si hufan u sifeeyaa 99%, FFP2 95%, iyo FFP1 80% ~ 90%. Dhexroorka walxaha halista ah waa 60-400nm, maaskaro ma gudbi karo walxaha waaweyn sidaa darteed waxay si wax ku ool ah u xannibi karaan Maandooriyaha Waxyeellada leh.
Hore: Maaskaro Koob
Xiga: Muraayadaha Amniga Saliva Fog Muraayadaha Muraayadaha Indhaha Cad Xalalka Ilaalinta ee Indhaha ee Daawada
SGS waxay caddeysay 75% gacmaha bilaa alkahoosha ah ...
Muraayadaha Amniga Saliva Foglas Muraayadaha Muraayadaha indhaha Nadiifi Ey ...
Isticmaal badan oo tayo sare leh oo Ilma 3 carruur ah & ...
qalliin tayo sare leh oo la tuuro oo aan guntin dhogor-gashi